BESTEK 220V inverter yemagetsi pamwe nemaviri madoko e USB emota | IPhone nhau
Jesu anotema | | dzakawanda
Izvo zvave kuwedzera kuwanda kuona adapter yemwenje wefodya mumotokari yega yega kuti uve ne USB kuburitsa uye kubhadharisa zvishandiso zvedu, ingave iyo iPhone, kana chero imwe smartphone, kana GPS navigator. Dambudziko nemaadapter aya kazhinji, mune yakawanda zvigadzirwa, iyo kurodha nguvandiko kuti, patinobatanidza chishandiso chedu nesokisi iyi zvinogona kutora maawa nemaawa kuti ubhadhare zvizere.
Neichi chigadzirwa chatinopa pazasi, dambudziko iri harizongonyangarika chete asi rinotipawo mukana wekugona kuita nekukurumidza mitoro uye plugging mumidziyo iwe yausina kumbofunga usati waisa plug mumotokari. Unogona here kufungidzira uchikwanisa kuvhara mukati kusvika kune mini-firiji mumotokari? uye imwe terevhizheni?
1 BESTEK simba inverter
1.1 Zvekuita zvehunyanzvi
1.2 Dhizaini uye zviyero
1.3 Mamwe mashoko
2 Tenga ikozvino
BESTEK simba inverter
Kutenda kukambani BESTEK, izvozvi zvinokwanisika kuvhara chero chinhu chemagetsi mumota medu neyakajairika uye kuchengetedzeka. Isu tinopa inverter yemagetsi yemota yedu iyo yatinogona kubatanidza kusvika kune maviri USB tambo uye, zvakanyanya kukosha, yakajairwa plug. Ngatimboongororai zvimiro zvaro zvizere.
Iyi inverter yemagetsi ine madoko maviri eUSB, imwe yechaji yakajairwa uye imwe yekukurumidza kubhadharisa ye 12V. Kune rimwe divi, ine plug ine simba rakanyanya 220V.
Basa rechinhu ichi, sekutaurwa kwazvinoitwa zita, kushandura iyo 12V kubva pamudzanga wakareruka wemotokari yedu kuita socket inosvika ku220V kuitira kuti tikwanise kubatanidza mudziyo watinoda, tichigara tichifunga simba rinodiwa ne yekupedzisira.
Dhizaini uye zviyero
Zvichida ndeimwe yemapoinzi asina kusimba echigadzirwa ichi, kubvira kwete kunyanya kudiki kana kureruka. Kutanga nehukuru, inoreba 12cm kureba ne8cm kukwirira, iine upamhi hwe4cm. Uye zvakare, ine tambo inosvika masendimita makumi mashanu nemashanu pakureba, anenge. Nezve huremu hweiyi inverter yazvino, iri kutenderedza iyo 500 gramu, huremu hwekuti pachigadzirwa chidiki senge ichi, chinogona kurema.
Ichi chigadzirwa chine mukana wekuti USB ports uye plug zvakazvimiririra zvachose, ndiko kuti, ine switch kubva kwatinotanga iyo 220V plug uye kunyangwe kana iri off, tinogona kushandisa USB zvinongedzo pasina dambudziko.
Izvo zvine akatungamira mwenje izvo zvicharatidza kana plug iripo, pamwe ne fan, ine ruzha rudiki kana isu tikateerera kune technical technical.
Kana iwe uchifunga kuti icho chinonakidza chigadzirwa uye iwe uchida kuchitenga, nekuve iPhone News muverengi iwe unogona kubatsirwa kubva kune € 5 dhisikaundi nekutenda kunotevera coupon: U5WQYZZ8
Tenga BESTEK Simba Inverter
Iyi BESTEK inverter yazvino haidi kuwedzerwa kuenderera, icho chiri nyore, chinoshanda chigadzirwa chinonyatsozadzisa icho chachinoshambadzira.
Chokwadi iwe wakambofamba kuenda kumahombekombe uye wakada kuti unwe zvinwiwa zvako zvichitonhora mukati merwendo kana kuti waida kuvhara mujaja ye laptop kuti uite rimwe basa mukati maro. Neichi chigadzirwa, zvese izvi zvisingafanoonekwe zviitiko zvichagadziriswa. Unayo inowanikwa mu Amazon ye € 29,99 uye nekodhi U5WQYZZ8 iwe zvakare uchachengetedza € 5 kusvika Mbudzi 6.
Kudzokorora kwe: Jesu anotema
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » BESTEK 220V inverter yemagetsi pamwe nemaviri madoko e USB emota
Ongororo yakanaka dai yanga isiri iyo nekuti zvave kudikanwa kuti utaure chimwe chehunhu hwakakosha muchigadzirwa cheizvi, uye ndizvo zvinowanzo tariswa painotengwa, ndiwo mawatts ayo inverter anotsigira kubatanidza chinhu chimwe kana mumwe. Kune mamwe anogona kungobata 100W chete uye kune ayo anobata 2000W, saka uchafanirwa kuenda kuAmazon kuti utarise uye uwane zvakanaka.
Apple moto mainjiniya ane mwanasikana akaonesa off iPhone X paanoshanyira baba